Cirifka Koonfur - Wikipedia
Cidhifka Koonfureed () waa geeska ugu shisheeya ama ugu fog ee koonfurta meeraha dhulka. Dunida aan ku nool nahay ee dhulka waxay leedahay labo cidhif oo kala ah Cidhifka Waqooyi iyo Cidhifka Koonfur ee dhulka.
2 Badweynta Koonfureed
Hadii Antarktika la barbardhigo qaarada Ustareliya weey ku labo laabmaysaa, taasi micnaheedu waa in Ustareliya le'eg tahay kala badh Antarktika. Sida la ogyahay ilaa 98% qaarada Antarktika waxaa qariyahay baraf kaasi oo leh dhumuc dhan 1.9 kilomitir (1.2 mayl), kuna fidsan dhamaan deegaanada qaarada marka laga reebo qeybta waqooyi oo kali ah.
Badweynta Koonfured (Badweynta Antarktika) waa mid ka mid ah shanta badweyn ee aduunka taasi oo dhacda meesha ugu xigta koonfurta dhulka. Badweynta Koonfured waxay ku taalaa koonfuta dhigta 60° K taasi oo ku wareegsan gobolka Qaarada Antarktika.
Antarctica — The Last Frontier
Antarctica — A Continent in Trouble
↑ British Antarctic Survey, Bedmap2: improved ice bed, surface and thickness datasets for Antarctica, The Cryosphere journal, page 390, 6 January 2014
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Cirifka_Koonfur&oldid=219410"
Last edited on 13 Oktoobar 2021, at 04:51
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 13 Oktoobar 2021, marka ee eheed 04:51.